Abriil 21 waa Google's Mobilegedden! Liiskaaga hubinta ee mobilada SEO | Martech Zone
Isniin, April 13, 2015 Axad, Abriil 12, 2015 Douglas Karr
Ma baqnaa? Maya, runtii maahan. Waxaan ka baqayaa in boggag aan loo habeynin isticmaalka mobilada ay horeyba uga cabanayeen isdhexgalka isticmaaleyaasha iyo kaqeybgal la'aanta. Hadda Google ayaa si fudud ula qabsaneysa iyadoo cusbooneysiineysa algorithms si loogu abaalmariyo boggaga loogu talagalay isticmaale moobiil leh qiimeyn weyn oo ku saabsan raadinta moobiilka.
Laga bilaabo 21-ka Abriil, waxaan ballaarin doonnaa adeegsiga moobiil-saaxiibtinnimo oo ah calaamadda darajada. Isbeddelkan wuxuu saameyn ku yeelan doonaa raadinta moobiilka ee dhammaan luqadaha adduunka oo dhan wuxuuna saameyn weyn ku yeelan doonaa natiijooyinka raadintayada. Sidaa awgeed, dadka isticmaala waxay u sahlanaan doontaa inay helaan natiijooyin raadin tayo leh oo tayo sare leh oo loogu talagalay qalabkooda. Raadinta Raadinta Google
Guuritaankani macno buuran buu leeyahay haddii aad i weydiiso ma run ahaantii ka qarow qof kasta ayaa ka qaylinaysa warshadaha SEO. Waxaan u maleynayaa in buunbuunin badan ay tilmaamayso dhibaato muhiim ah warshadaha raadinta - feejignaan aad u badan oo ku saabsan qiimeynta iyo feejignaan ku filan oo ku saabsan kaqeybgalka isticmaalaha iyo beddelaadyada. La-taliyayaasha SEO ayaa hagaajin lahaa boggooda macaamiishooda waqti dheer ka hor haddii ay diiradda saari lahaayeen qiyaasta saxda ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho Tijaabada Google ee saaxiibtinimo-saaxiibtinimo iyo Warbixinta Adeegsiga Mobilka ee Webmaster-ka si loo xaliyo oo loo saxo wixii arrimo ah ee taagan bogaggaaga. Waa kuwan faahfaahin dhammaystiran oo ka socota Sagaal Hertz, Shift degdeg ah, iyo AntiPull.
Tags: april 21adeeg firfircoongoogle mobile seogoogle seoraadinta moobiilkaseo mobilegoobta mobiladamuuqaalka moobiilkabogga mobiladaguurtaygoobaha jawaabtaURL gooni ahgaroonka diyaaradaha
Kani waa mid kale oo taxane ah oo ilo waweyn oo aan ku qanciyo madaxdayda inaan u baahan nahay inaan cusbooneysiino. Way adagtahay in isbedel la sameeyo markii wax walba la arko waa calaamadda doolarka ee maalgashiga bilowga ah
Waxaan u maleynayaa inay tahay wax caqli gal ah iyo wax yar oo munaafaqnimo ah Google inay riixdo tan marka adeegyada Google laftoodu ay ka mid yihiin dambiilayaasha ugu xun.
Tusaale ahaan waxyaabaha sida farta Google iyo gorfaynta ayaa si fiican loogu yaqaan inay sababaan xannibaadda (bixinta) iyo arrimaha xawaaraha.
In kasta oo aan si kal iyo laab ah u oggol nahay in aan dhammaanteen noqonno kuwa saaxiibtinimo leh, waxaan u baahannahay qalab ka wanaagsan labada adeeg ee Google ee aad ku talisay.
Imtixaanka Isticmaalka Mobilada ee Google wuxuu bixiyaa natiijooyin kala duwan iyadoo kuxiran waqtiga ay maalintii tahay. Mararka qaarkood waxaad tahay awesomely mobile saaxiibtinimo iyo waqtiyo kale aan,
Iyo Qalabka Websaydha ee Google ayaa caan ku ah inuu had iyo goor rajo la’aan noqdo taariikhda natiijooyinkeedana.
In kasta oo aad arki karto boggaga ay u aragtay moobilku in uusan ahayn saaxiibtinimo bil ka hor, ma jirto hab lagu cusboonaysiiyo loona ogeysiiyo markii aad arrimaha hagaajisay.
Dheeraad ah waxaan ku dhejiyay calaamadeynta xogta qaabeysan boggeyga sanado ka hor welina waxaan sugayaa WMT si aan u duubo gebi ahaanba.
Marka waa inaad isweydiisaa, haddii Google uu bilaabayo ciqaabidda bogagga, miyey ku salaysnaan doontaa xog hore ama xogta hadda jirta?
Google ma siin doontaa qof walba fursad cadaalad ah si uu ugu wargaliyo marka arrimahaas la xalliyo?
Waqtigan xaadirka ah taasi waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn.
Calaamadee, anigu ma diidani gabi ahaanba. Si kastaba ha noqotee, Maamulayaasha Websaydhada Google runtii waxay qabteen shaqo weyn oo ku saabsan dhisida qalab dhamaystiran oo lagu tijaabiyo bartaada. Hubso inaad iska diiwaangeliso Maamulayaasha Webka, ku dar boggaaga, oo arag natiijooyinka. Waxay kaa caawinayaan inaad xalliso arrin kasta oo hoos u jirta pixel-ka.